Khasaaro Ka Dhashay Gaari Dad Shacab Ah Saarnaayeen Oo Lagu Rasaaseeyay Gobolka Galgaduud – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Puntland Oo Qaadeysa Go,aano Lagu socodsiinayo Lacagta Shilin Soomaaliga
Ciidamada Mareeykanka Oo Ka Baxay Soomaaliya
Maamulka Galmudug Oo Ku Dhawaaqay Dagaal Ka Dhan Ah Al-shabaab
Taliska Ciidanka Xooga Oo Kulan Ka Yeeshay Deegaano Dhawaan Al-shabaab Go’odoomiyeen
Khasaaro Ka Dhashay Gaari Dad Shacab Ah Saarnaayeen Oo Lagu Rasaaseeyay Gobolka Galgaduud
warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxaha hubeysan oo xalay gaari dad shacab ah saarnaayeen ku rasaaseeyay deegaanka garasle ee hootaga degmada balanbale ee gobolka galgaduud .
wararka ayaana waxa ay sheegayaan in qasaare kalduwan ay ka dhasheen rassaasta lagu furay gaariga ay wateen dadka shacabka ah .
kooxa maleeshiyaad hubeysan ah ayaa waxa ay wararku sheegayaan in gaariga ay rasaas ku fureen xilli uu marayay deegaanka garasle islamarkaasna ay goobta iskaga carareen kooxdii hubeysneyd ee ka dambeeysay weerarkaasi
qasaaraha ka dhashay rasaasta lagu furay gaari dadka shacabka ah ayaa waxa la sheegay in ay ku geeriyoodeen ilaa sadax ruux halka tira kalana ay ku dhaawacmeen .
lama oga ilaa iyo hada sababta keentay in la rasaaseeyo dadkaan shacabka ah balse wararka qaar ayaa waxa ay tilmaamayaan in weerarkaan uu la xariiro aanooyin qabiil oo muddiyinkii dambe ka taagnaa deegaanada hoosyimaada gobolka galgaduud .
ila deegaanka ah oo aan la hadalnay ayaa waxa ay inoo sheegeen in dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay weerarkii lagu rasaaseeyay gaari dadka shacabka ay saarnaayeen la gaarsiiyay isbitaalada waaweyn ee ku yaal degmada balanbale ee gobolka galgaduud .
sikastaba ma ahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale dad shacab ah ay waxyeelo uga soo gaarto dhibaatooyinka la xariira aanooyinka qabiil iyo colaadaha beelaha inta badan ee ka dhaca gobolka hiiraan .
waxaana la sheegaa in xiisadaha colaadeed ee beeluhu ay saameyn weyn ku yeeshaan dadka shacab ka ah ee ku safraya gobolada dalka kuwaasi oo iyaga oo aan waxba galabsan dhibaato loo geeysto.